Walaaca dunidu ka qabto Feyraska Korona oo cirka isku shareeray | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Walaaca dunidu ka qabto Feyraska Korona oo cirka isku shareeray
Walaaca dunidu ka qabto Feyraska Korona oo cirka isku shareeray
Waxaa cirka isku sii shareeray cabsida iyo walaaca ay dunidu ka qabto feyraska Korona oo si xowli ah dunida ugu sii fidaya.
Waxaa wali sii kordheysa tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ee ku nool meelo ka baxsan dalka Shiinaha sida Iiraan, Kuuriyada Koofureed iyo Talyaaniga.
Dalalka la dariska ah Iiraan ayaa xiray soohdimaha ay la wadaagaan dalkaas oo uu feyrasku soo gaaray, Talyaaniga ayaa isna magaalooyinka qaar ee dalkiisa ku soo rogay karantiil halka Kuuriyada Koofureedna ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah.
Dalalka dariska la ah Iiraan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay xireen xuduudaha ay la wadaagaan dalkaas waxa ayna gabi ahaanba joojiyeen duullimaadyada taga iyo kuwa ka imaada Iiraan.
Wasaaradda caafimaadka Urdun ayaa dalkeeda u diidday in ay soo galaan dadka ka imanaya Iiraan iyo Kuuriyada Koofureed oo ah laba dal oo uu xanuunka si weyn ugu sii baahayo.
Sucuudiga, Kuweyt, Ciraaq, Turkiga, Afghanistan iyo Armenia ayaa aad u adkeeyay socdaallada taga iyo kuwa ka imanaya Iiraan.
Tallaabooyinka dalalka ku yaalla mandiqadda Bariga Dhexe ay ka qaadanayaa Iiraan ayaa yimi kaddib markii dalkaasi laga diiwaan geliyay 48 bukaan oo qaba feyraska Korona iyo waliba 8 qof oo isla dalkaas ku geeriyootay xanuunka awgii.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa Axaddii sheegtay in tirada dadka uu haleelay feyraska ay gaareen 78,000 oo qof walina uu sii fidayo xanuunka.
Feyraska ayaa tan iyo dabayaaqadii sanadkii tagay dalka Shiinaha oo qudha ku soo ritay 77,000 oo qof.
WHO ayaa sheegtay in tirada dadka u geeriyooday feyraska ay tahay 2% iyada oo tilmaantay in dadka da’da ah iyo dadka qaba xanuunnada aan laga bogsan sida macaanka ay yihiin kuwa ugu badan ee u geeriyooda feyraska.
Shiinaha oo ah ubucda uu ka soo bilowday feyraska ayaa sheegtay Isniinta maanta in ay diiwaan geliyeen tan iyo shalay 150 qof oo u geeriyootay feyraska taas oo wadarta dadka feyraska ugu geeriyooday Shiinaha ka dhigeysa 2592 qof.
Previous articleDowladda & Jubbaland oo loolan ugu jira la wareegitaanka Bu’aale
Next articleWasiiro Maamulka KG Oo Xil Ka Qaadis Lagu Sameeyey.